China Cast Iron Double Disc Swing Khangela umzi-mveliso weValve kunye nababoneleli |Dongsheng
1.Uxinzelelo lokusebenza: 1.0Mpa/1.6Mpa/2.5Mpa
3. Ubuso ngobuso ngokwe-DIN3202K3, ANSI 125/150
5. Uvavanyo: DIN3230, API598.
Umsebenzi weeplati ezimbini zokujonga i-valve kukuvumela kuphela i-medium ukuba ihambe kwicala elinye kwaye ithintele ukuhamba kwindlela enye.Ngokwesiqhelo olu hlobo lwevalvu lusebenza ngokuzenzekelayo.Ngaphantsi kwesenzo soxinzelelo lwe-fluid ehamba kwicala elinye, i-valve flap ivula;xa ulwelo luqukuqela kwelinye icala, uxinzelelo lolwelo kunye nokuzenzekela kwe-valve flap isenzo kwisitulo sevalvu, ngaloo ndlela kunqunyulwa ukuhamba.
Iimpawu zesakhiwo seWafer Butterfly Check Valve:
Ubude besakhiwo bufutshane, kwaye ubude besakhiwo buyi-1/4 ukuya kwi-1/8 kuphela yevalve yokukhangela i-flange;
Ubungakanani obuncinci kunye nobunzima obulula, ubunzima bayo buyi-1/4 ukuya kwi-1/20 kuphela yevalve yokukhangela i-flange;
I-valve flap ivala ngokukhawuleza kwaye uxinzelelo lwehamile yamanzi luncinci;
Zombini iipayipi ezinqamlekileyo kunye nemibhobho ethe nkqo ingasetyenziswa, kwaye ukufakela kukulungele;
Umjelo wokuhamba awuthinteki kwaye ukuxhathisa ulwelo kuncinci;
Isenzo esibuthathaka kunye nokusebenza kakuhle kokutywinwa;
I-valve clack stroke imfutshane, kwaye impembelelo yempembelelo yokuvala ivalve incinci;
Ulwakhiwo olupheleleyo, olulula kunye noluncinci, ukubonakala okuhle;
Ubomi benkonzo ende kunye nokuthembeka okuphezulu.
Asiyi kwenza konke okusemandleni ethu ukukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo ezigqwesileyo, kodwa sikwalungele ukwamkela naziphi na iingcebiso.
Kwi-OEM ye-Dual Plates Jonga i-Valve Cast yentsimbi yomzimba kunye ne-SS Disc, wamkele umbuzo wakho.Siza kuvuya ukuseka unxibelelwano lweshishini kunye nawe!
Ubuchwephesha be-OEM ye-Dual Plate yokujonga iValve, i-OEM Khangela iValve, iimpahla zethu zidume kakhulu ngegama, njengoMzantsi Merika, iAfrika, iAsia njalo njalo.Iinkampani "zokudala iimveliso zeklasi yokuqala" njengenjongo, kwaye zizame ukubonelela abathengi ngezisombululo ezikumgangatho ophezulu, ukubonelela ngenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobugcisa, kunye nokuxhamla ngokubambisana kwabathengi, ukudala umsebenzi ongcono kunye nekamva!
2 Intwasahlobo Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
3 Icwecwe SS316/SS304/WCB/C954
4 Ring Intsimbi
5 Isitulo Ring NBR/EPDM/VITON
6 Umngxuma-1 SS316/SS304
7 Umngxuma-2 SS316/SS304
9 I-Gasket-2 NBR
10 Screw Intsimbi
DN (mm) 40 50 65 80 I-100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
Ngaphambili: Cast Iron Single Disc Swing Khangela iValve
Okulandelayo: IValve ye-Diaphragm yesiqu esinyukayo(Mnyama)